မငြိမ်သက် မှု ဖြစ်စဉ် များ ၏ နောက် ကွယ် တွင် ဦးအောင်သောင်း နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံ များ အဓိက နေရာ မှ ပါဝင် နေဟု ဆို | The FNG
မငြိမ်သက် မှု ဖြစ်စဉ် များ ၏ နောက် ကွယ် တွင် ဦးအောင်သောင်း နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံ များ အဓိက နေရာ မှ ပါဝင် နေဟု ဆို
June 6, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
တင်ကျော်ကျော်စိုး ၊ ၊နေပြည်တော် သတင်း ရပ်ကွက် မှ ကြားသိရ သော သတင်းများ
← နန်းသက် ၆၀ နှစ် ဖျော်ဖြေပွဲ ဘာကင်ဟမ် တွင် ကျင်းပ (Photo Gallery)
မီလေး ဆိုင်းရပ်(စ) နှင့် လီယမ် ဟမ်ဝတ် တို့စေ့စပ် →
12 responses to “မငြိမ်သက် မှု ဖြစ်စဉ် များ ၏ နောက် ကွယ် တွင် ဦးအောင်သောင်း နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံ များ အဓိက နေရာ မှ ပါဝင် နေဟု ဆို”
khinezar June 23, 2012 at 12:30 pm · ·
နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေတွေနဲ.ချမ်းသာနေတဲ့ လူးကြီးကို မြန်မြန်အရေးယူနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..
လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် June 22, 2012 at 7:16 pm · ·
သြော်..အောင်သောင်းရယ်…မင်းမို့ လုပ်ရက်တယ်ကွာ…အသက်တွေဘယ်လောက်သေသွားခဲ့ပြီလဲ…အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေ ဘယ်လောက်တောင်သနားစရာကောင်းလိုက်သလဲ…မင်းအဖြစ်ကို တခြားနိုင်ငံတွေက မသိပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်…သိသွားရင်မြန်မာတွေ ဒီလောက်တောင် ယုတ်ပတ်သလားလို့ အမေးခံရမှာ စိုးလို့ပါ….ဘာပဲပြောပြော ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွာ…မင်းကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ…ကြိုးစင်တက်ရင်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုခဲ့တာလေးကိုအာရုံပြုပါမွာ…ဥပါတ်ဒါန်ကြောင့် ဥပါတ်မရောက်ပါစေနဲ့..
Mg Aung Win June 24, 2012 at 12:14 pm · ·
mok June 10, 2012 at 8:47 pm · ·
moewaii June 9, 2012 at 10:46 am · ·
သူက ဘယ်လိုပဲလုပ်သည်ထားဦး ..အခုအရေးကြုံပြီ..။မြန်မာပြည်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပက ကုလားတွေ ရာဇသံတွေ ပေးနေပြီ.။ အမျိုးကိုချစ်တဲ့ NLD ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ.။ Democracy တစ်ခုတည်းကိုပဲ တစ်တွတ်တါတ်တောင်းဆိုမနေကြပါနဲ့.။ အရေးကြီးတာကို အရင်လုပ်ကြပါတော့.။ မွတ်လင်တွေ ကို မောင်းထုတ်ကြပါတော့.။
san June 8, 2012 at 11:02 pm · ·
ကျွန်မ က ဗမာ လူမျုိးတစ်ယောက်ပါ..ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ..ကျွန်မ တို့တိုင်းရင်း သား တွေ တွက်ရင်လေး မိပါသည်.. ကျွန်မ တို့ဒီနိုင်ငံ မှာ အသက်ရှင်နေ ထိုင်နိုင် ဖို့အရေး တွေး ပြီး စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်ရပါသည် ..နိုင်ငံ တော်က လူမဆန် နိုင်ငံတော် အကြီး အကဲ အာဏာ ရူး တွေ ၇ဲ့ ကြီးစိုး နှိပ်စက်မှု့တွေ ၇ဲ့ အောက် မှာ ရှိနေတဲ့ …ကျွန်မ တို့ တိုင်းရင်းသား တွေ တွက်စိတ်မအေး စရာ ပါပဲ…..နိုင်ငံ တိုင်းမှာ ..ဆိုးတဲ့ အာဏာ၇ူး ..ကောင်းတဲ့ အာဏာ ရူး တွေ ရှိကြတယ် .. အဲလို လူမဆန် တဲ့ လူတွေ ကြားမှာ ကျွန်မ တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ က မလူးသာ မလွန့်သာ …..ဒီလောက် ဆိုးရွား နေတဲ့ ..ကုလား မွတ် စလင်တွေ ..ခွေး စုတ် တွေကို .. နည်း ပရိယာယ် သုံး ပြီး….ကန်ထုတ် လိုက်ပါတော့……….. ကျွန်မ တို့ သွေး မြေခ သလို့ဒင်းတို့ခွေး မွတ်စလင် ၇ဲ့ တိုင်းပြည် သဲ မုန်တိုင်းထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားပါစေ………………
san June 8, 2012 at 10:53 pm · ·
ဒီသတင်း သာ အမှန် ဖြစ်ခဲ့ ရင် ဦးအောင်သောင်းကို သေဒဏ် ပေးသင့်ပါသည်……..
U Thi Ha Tint Swe June 7, 2012 at 2:34 am · ·
38th,Anniversary of June,6th,74 on All Burma’s worker’s strikes exist on June,6th,2012 and 50th,Anniversary of July,7th,62 on All Burma’s student’s movement will exist on July,7th,2012 and 8888-All Burma’s democratic movement will exist on August,8th,2012 and 22nd,Burma’s black september on Myanmar Junta Regime on Sept,18th,1988 will exist on Septemver,18th,2012 and so,those moments could let to emote many kinds of sides among Myanmar Junta Regime & Global Burma’s democratic forces & others and about it,many kinds of sides may alert for their attensions with unhoping chance and so,need to care of it.For example! Chinese & Burmese conflict on All Burma’s rice-crisis in 1967.
Naing Ngan Lin June 6, 2012 at 10:02 pm · ·
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရွှေခဲအင်းကျေးရွာတွင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ငံလင်း အောင်နိုင်ရေးအား ကူညီပေးခဲ့မှု့ကြောင့် အငြိုးထားပြီး သားအဖ(၂)ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစံအေးနှင့် သားရောင်ခြည်ဦးတို့အား ၁၁.၅.၂၀၁၂ နေ့တွင် ရွှေခဲအင်းအုပ်စုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရန်နိုင်၊ နောက်မှဖိအားပေးသူ စရဖ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး မှ စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် ဆယ်အိမ်မှူး ရာအိမ်မှူးများမှ လုပ်ကြံပြီး မြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် ၅(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်းနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်စ…ခန်းရှိ အချုပ်ခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရသည်။ မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ၂၅.၅.၂၀၁၂ မှ ၈.၆.၂၀၁၂ နေ့အထိ ရဲလုပ်ငန်း(ရီမန်) ယူခဲ့ပြီးပြီး၊ ၆.၆.၂၀၁၂ နေ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟုကြားရပါသည်။အမှန်စင်စစ် ၄င်းအမှူ့ဖြင့် တရားမစွဲခင်က ၄င်းကျေးရွာအုပ်ရှိ အခြားရွာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျောက်ခဲအင်း ကျေးရွာရှိ အန်အယ်ဒီအားအကူအညီပေးခဲ့သော လူငယ်များအား တရားစွဲဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ စခန်းမှ မဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့် အခုတစ်ကြိမ်တွင် အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီး အမှူ့မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံထားမှူ့များရှိကြောင်းလည်း ရွားသူရွာသားများအကြားပြောဆိုနေကြပါသည်။ အောက်ခြေမှာ မပြောင်းလဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ဒေသခံပြည်သူများမှ စိတ်ပျက်နေပြီး သမ္မတကြီး၏ သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေသည်။ ထိုက်ိစ္စအား အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကောင်းမွန်သော အပြောင်းအလဲအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း
၈.၆.၂၀၁၂ ရုံးထုတ်မည်။ ဆက်သွယ်လိုပါက ၀၉၅၀၇၁၄၆၁ နှင့် ၀၉၄၃၀၁၈၇၇၁
kyaw June 6, 2012 at 9:36 pm · ·
nanyu June 6, 2012 at 7:39 pm · ·
cowardice. This is more worse than 2nd war massacre.
smoke June 6, 2012 at 5:59 pm · ·
BULL SHIT MAN!